October 15, 2019 - Pardeshi Khabar
नेपाल क्रिकेट: आईसीसीले साढे तीन वर्षपछि यसकारण गर्‍यो क्यानलाई लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा
Post by: आकाश शेर्पा प्रकाशीत मिति: October 15, 2019
असोज २८। साढे तीन वर्षअघि निलम्बनमा परेको नेपाल क्रिकेट सङ्घ (क्यान) ले पुन: अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट सङ्घ आईसीसीको सदस्यता पाएको छ। सोमवार दुबईमा बसेको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी)को बोर्ड बैठकले नेपाललाई लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको हो। नेपाली क्रिकेटको नेतृत्व तहमा विवाद सिर्जना भएपछि सन् २०१६ मा आईसीसीले क्यानको सदस्यता निलम्बन गरेको थियो। त्यतिखेर विश्व क्रिकेटको सर्वोच्च निकायले नेपाल क्रिकेट सङ्घमा सरकारी हस्तक्षेप र आर्थिक अनियमितता भएकाले त्यस्तो कदम लिइएको जनाएको थियो। क्यानको विवाद अदालतमा पनि पुगेको थियो। आईसीसीले नेपाल र जिम्बाब्वेलाई फेरि आफ्नो सदस्यता दिएको हो। केही हप्ताअघि भएको निर्वाचनमा चतुरबहादुरफुर्सदमा
खेलकुद, ताजा खबर, नेपाली खबर, फोटो ग्यालरी No Comments »
(भैरहवा) २८आश्विन| ओमकार गौचनले दसैंमा टीका थाप्न आएका नातेदारलाई बुधबार बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी लगे तर भैरहवादेखि लुम्बिनीसम्मको २२ किमि सडकको दुरवस्थाले यात्रा खल्लो हुन पुग्यो । ‘सबै जना लुम्बिनी घुम्न उत्साहित थिए,’ भैरहवाका पुराना व्यापारी तथा समाजसेवी गौचनले भने, ‘तर खाल्टैखाल्टा परेको सडकले निराश बनाइदियो ।’ निर्माणाधीन भैरहवा–लुम्बिनी सडकमा धुलोले छोपिएका गाडी । खाल्डाखुल्डी सडकमा घन्टौंको जामले यात्रु पीडित छन् । तस्बिर : माधव/कान्तिपुर सडककै कारण लुम्बिनी पुगेर फर्कंदा सात–आठ घण्टा आराम गर्नुपरेको र केहीले दुखाइ कम गर्ने औषधि सेवन गरेको उनले सुनाए । लुम्बिनीको प्रवेशद्वार मानिने भैरहवाको बुद्धचोकबाटै सडकको बेहाल सुरु हुन्छ । मालवाहक ट्रक,फुर्सदमा
ताजा खबर, नेपाली खबर, फोटो ग्यालरी, बिशेष समाचार, राजनीति, राष्ट्रिय समाचार No Comments »
एनआरएन विश्व सम्मेलन आजदेखि,एनआरएन विश्व सम्मेलन आजदेखि, नयाँ नेतृत्व कसको पोल्टामा ?
काठमाडौं, २८ असोज । गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएन)को नवौं अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन मंगलबारदेखि काठमाडौंमा सुरु हुँदैछ । यो सम्मेलनले आगामी दुई बर्षका लागि नयाँ पदाधिकारीको निर्वाचन गर्नेछ । नयाँ नेतृत्वका लागि वैचारिक समूहकै फरक समिकरण र प्यानल देखिने निश्चितप्राय छ । अहिलेको कार्यसमितिमा रहेका दुई उपाध्यक्ष वैचारिक समूहको नेतृत्व गर्दै अध्यक्षका प्रत्यासी बनेका छन् । कुमार पन्त र कुल आचार्य नयाँ नेतृत्व सम्हाल्नका लागि मैदानमा छन् । अध्यक्षका यी दुई प्रत्यासी मध्ये पन्तले बामपन्थी र आचार्यले प्रजातान्त्रिक विचार समूहको नेतृत्व गरेका छन् । २५ सय प्रतिनिधि रहेको सम्मेलन हायात होटलमाफुर्सदमा
ताजा खबर, नेपाली खबर, परदेशी समाचार, फोटो ग्यालरी No Comments »
यी हुन् प्रस्तावित १३ सुरुङमार्ग
Post by: परदेशी खबर प्रकाशीत मिति: October 15, 2019
सरकारले सडक सञ्जाललाई सुरक्षित र छोटो बनाउन यो वर्ष १३ वटा सुरुङमार्ग अन्डरपासको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको छ । तीमध्ये ८ सुरुङमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको छ भने ५ वटाको बाँकी छ । भौतिक पूर्वाधार तथा योजना मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रममा चालु आर्थिक वर्षमा १२ सुरुङमार्गको अध्ययन गर्ने उल्लेख छ । प्रस्तावित सुरुङमार्ग यस्ता छन् । १.बुटवल–सिद्धबाबा २. टोखा–छहरे–गुर्जे भन्ज्याङ ३. कोटेश्वर–जडीबुटी ४.खुर्कोट–चियावारी (सिन्धुली) ५.कैलाली खुटिया–बीपीनगर–दियायल खण्ड ६.थानकोट–चित्लाङ ७.गोदावरी (ललितपुर)–मानेचौर (काभ्रे) ८. नयाँ बनेश्वरमा अन्डरपास ९. कुलेखानी–भीमफेदी १०. हेम्जा–नयाँपुल (पोखरा–बागलुङ सडक) ११. दोलखाको लामाबजर १२. बुटबल–नारायणगढको दाउन्ने खण्ड १३.बेत्रावती–घट्टेखोला (स्याफ्रुबेसी) यो समाचारफुर्सदमा
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्ने तयारी गरेका छन्। पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँगको परामर्शमा ओलीले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न लागेका हुन्। ओलीले सोमबार बिहान दाहालसँग यो विषयमा छलफल पनि गरे। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा दुई अध्यक्षबीच झन्डै दुई घण्टा वार्ता भएको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी बुधबार म्यान्मा भ्रमणमा जानुअघि मन्त्रिमण्डल हेरफेरको तयारी छ। ओलीले ६ मन्त्री हेरफेर गर्न सक्ने बालुवाटार स्रोतले बतायो। शिवमाया तुम्बाहाङफेलाई प्रतिनिधिसभाको उपसभामुखबाट राजीनामा दिन लगाई मन्त्री बनाउने तयारी ओलीको छ। ओलीले सोमबार नै उपसभामुखसँग राजीनामाका विषयमा छलफल गरी मन्त्री पदका लागि तयारी अवस्थामा बस्नफुर्सदमा
परदेशी खबर- निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महराबाट बलात्कार प्रयासकी पीडित रोशनी शाहीको शरीरमा लागेका चोटपटकमा बाहिरी मानिसको संलग्नता रहेको पुष्टि भएको छ । त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा गरिएको फरेन्सिक जाँचबाट रोशनीको अनुहार लगागत शरीरका विभिन्न भागमा लागेको चोटपटकमा बाहिर मानिसको संलग्नता देखिएको उच्च स्रोतले जानकारी दियो । प्रहरीले रोशनीलाई असोज १७ गते त्रिवि शिक्षण अस्पताल लगेर स्वास्थ्य परीक्षण गराएको थियो । स्रोतका अनुसार नियमित स्वास्थ्य अवस्था र अपराध अनुसन्धानसम्बन्धी प्रमाण संकलनका लागि गरिएको रोशनीको ‘फरेन्सिक जाँच प्रतिवेदन’ अस्पतालले प्रहरीलाई दिइसकेको छ । यो समाचार कान्तिपुर दैनिमा मातृका दाहालले लेखेका छन् ।